Wargaysyada Magaalooyinka Madrid & Barcelona Oo Qayb Ka Noqday Ololaha dagaalka Loogu Jiro Xidiga Tottenham Ee Christian Eriksen Iyaga Oo Blaugrana & Los Blancos La Kala Saftay. – GOOL24.NET
Wargaysyada Magaalooyinka Madrid & Barcelona Oo Qayb Ka Noqday Ololaha dagaalka Loogu Jiro Xidiga Tottenham Ee Christian Eriksen Iyaga Oo Blaugrana & Los Blancos La Kala Saftay.
Real Madrid iyo Barcelona ayaa dagaal adag uu ku dhexmarayaa laacibka khadka dhexe ee Christian Eriksen kaas oo ka tirsan kooxda Tottenham iyada oo labada naadiba u doonayaan inuu noqdo laacibka hoggaamiya kubadda kooxda sannadaha soo socda. Laakiin wargaysyada Madrid iyo Barcelona ka soo baxa ayaa u muuqda kuwo midba uu war gaar ka ah ka gudbinayo xaalada Eriksen.
Real Madrid ayaa doonaysa in Eriksen uu buuxiyo booska uu bannayn doono kubbad sameeyaha reer Croatia ee Luka Modric oo ay da’diisu xagaaga noqonayso 33 jir, lana filayo in ugu badnaan uu laba sannadood kusii jiro garoomada.
Wargaysyada kala taageera kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa u muuqda kuwo kala jiidanaya wararka Christian Eriksen la xidhiidhinaya Camp Nou iyo Bernabeu, waxaana socda wax u muuqda olole kooxaha Madrid iyo Barcelona loogu dhiiro galinayo saxiixa Christian Eriksen.
Barcelona ayaa dhinaceeda raadinaysa ciyaartoygii beddeli lahaa xiddigii dhowaanta ka tegay ee Andres Iniesta, waxaana markii ay maamulka kooxdu rog-rogeen talooyinka ku saabsan beddelka ugu habboon ay isku waafaqeen in Eriksen uu leeyahay farsamada ugu habboon ee kaalintaas u geli karta.
Wargeyska Sport ayaa boggiisa hore labadii maalmood ee ugu dambeeyey ku qaadaa-dhigayey warar ku saabsan Christian Eriksen oo uu ku sheegayey inuu ku biirayo Barcelona, isagoo soo xiganaya ilo wareedyo u gaar ah, hase yeeshee, waxa dhinaca kale istaagay wargeyska Marca kaas oo isaguna ku dooday in laacibka Tottenham uu ka tegayo Spurs fadhigiisuna noqon doono magaalada Madrid, halkaas oo xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya labada kooxood uu ka caawinayo Real inay si fudud gacanta ugu dhigto.
Lama heli karo Eriksen
Wargeyska kasoo baxa Spain ee Mundo Deportivo ayaa daabacay in Eriksen aanay kooxaha reer Madrid sinaba u heli karin.
Wargeyska oo soo xiganaya wariye lagu magacaabo Francesc Aguilar, ayaa waxa uu u sheegay Real iyo Barca inay iska illoobaan laacibka reer Denmark, isla markaana ay raadsadaan ciyaartooyo kale.
Wargeyska Sport ayaa isaguna war kale oo uu daabacay in haddii ay Barcelona ay ku fashilanto dalabyadeeda Eriksen iyo Griezmann inay u dhaqaaqi doonto Dane, laakiin Marca ayaa ku doodaysa in qorshaha wakhtiga dheer uu yahay in Eriksen uu beddelo Luka Modric, halka Mundo Deportivo uu aaminsan yahay in labada kooxood aanu midkoodna heshiis la geli doonin.
Eriksen oo ay da’diisu tahay 26 jir, waxa uu Tottenham kula jiraa heshiis soconaya illaa 2020, laakiin bandhig ciyaareedkiisii labadii sannadood ee u dambeeyey ayaa ka dhigay in kooxaha waaweyn ee Yurub oo kuwa Spain ugu horreeyaan ay ka shaqeeyaan sidii ay u carqaladayn lahaayeen qandaraaska uu ku joogo Spurs.
47 ciyaarood oo uu Tottenham u saftay xili ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey 14 gool iyo 13 uu caawiye ka noqday, taas oo Tottenham u sahashay inay kaalinta saddexaad ee horyaalka ku dhamaystaan.